Etu esi ehicha efe ọsụsọ
1. Onye na-eme swita kwenyere na uwe ndị a kpara akpa kwesịrị ịpụ ntụ ma tinye ya na mmiri oyi maka minit 10-20 tupu ịsa. Mgbe ị wepụsịrị ya, pịpụta mmiri ahụ, tinye ya na ngwugwu ntụ ntụ ma ọ bụ ihe nchacha ncha ma jiri nwayọ na-ehicha, wee ...
Nlekọta maka ihicha ajị sweaters
1. Ndị na-emepụta sweta maara na switit ejiri ọsụsọ dị mfe nrụrụ, yabụ na ị gaghị adọta ya n'ike iji zere ụdị uwe ahụ ma metụta ụdị ụtọ ị na-eyi. 2. Mgbe ịsachara akwa ahụ, akwa ahụ ejiri kpuchie ga-akpọnwụ na ndò, kpọgidere ya na ventilated na ebe kpọrọ nkụ ...
Kpa na kpara
Ndị na-emepụta sweta maara na ọdịiche pụtara ìhè dị n'etiti ihe mkpuchi na ịkpa ihe bụ: a na-eji akwa na ahịhịa akpa ya, yabụ enwere ụzọ abụọ nke ogologo na akwa. Ma ị nwere ihe mkpuchi bụ ihe akaghị nke na-aga n'ihu, n'ihi ya, ọ nwere ogo ụfọdụ ...
Akara ejiri kpuchie ya
1. Acetate eriri (Acetel) kpara akwa Sweater na-emepụta acetate eriri nwere ihe pụrụ iche Njirimara dị ka silk, eriri luster na-enwu gbaa na agba, magburu onwe drape na obi na-adị. Uwe a kpara nke ọma site na ya nwere mmetụta aka dị mma, uwe dị mma, mmịpụta mmiri na ...
Usoro nhọrọ ise maka ịhọrọ akwa ụmụaka
site ha na 21-06-29
Wang: Ndị na-emepụta sweta kwenyere na ị gaghị enwe ike ilele ọnụahịa mgbe ịzụrụ uwe, mana ịdị mma bụ isi. Isi: Zere ịzụta uwe na-esi isi; zere ịzụrụ uwe ndị ejirila ọgwụ mgbochi ma mee ọcha maka ụmụaka. Ajụjụ: ...
Kedu ihe bụ usoro ịchọ mma nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ sweta
Itlọ ọrụ na-arụ Knitwear bụ ịhazi ngwaahịa na ngwongwo n'ime uwe. Karịsịa na-ezo aka na mgbakwunye nke frill, tassels, bọtịnụ, pompoms, stringing na ngwa ndị ọzọ na uwe, ma ọ bụ ijide eri, ifuru, pleating, na pleating. Jiri sp ...
E kwesịrị ilebara anya maka usoro mmepụta nke uwe a kpara
1. Ndị na-ebu sweta na-ekwere na ọ dị ezigbo mkpa ịnwale nsị nke akwa ahụ tupu ị belata ma dozie ụkpụrụ ahụ dị ka nsị ahụ. 2. Thekpụrụ kachasị nke uwe a kpara akpa bụ overhang overhang, nke dabere na njupụta, obosara, agba na quali ...
Skillsfọdụ nkà dị na agba jikọrọ nke ọla ịchọ mma
1. Uhie na-acha ọcha, nwa, acha anụnụ anụnụ-agba ntụ, agba aja aja na isi awọ. 2. Pink na-acha odo odo, isi awọ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị, ọcha, agba aja aja, aja aja, acha anụnụ anụnụ. 3. Oroma uhie na-acha ọcha, nwa na-acha anụnụ anụnụ. 4. Yellow na odo odo, acha anụnụ anụnụ, ọcha, aja aja, oji. 5. Brown na agba aja aja, ọgazị edo edo, brik na-acha ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ-gree ...
Mmalite na mmepe nke uwe nwoke ejiri aka
Uwe ejiji egosiwo na mmalite nke mmepe nke ọha mmadụ. Ndị mgbe ochie jiri “akwa” akwa dị iche iche ha hụrụ gburugburu ha chebe onwe ha. Ejiri akpụkpọ anụ anụmanụ mee uwe mbụ nke mmadụ, yana "akwa" mbụ ...